KG dib u ceshatay dadkeeda lagu soo xumeeyay Laascaanood | KEYDMEDIA ONLINE
Kumanaan qof oo kasoo jeeda Koonfur Galbeed ayaa laga soo cayriyay Laascaanood, kuwaasoo hadda ku ku sugan Puntland.
BAYDHABO, Soomaaliya - Waxaa Maanta oo Sabti ah degmada Baydhabo gaarey qeybtii ugu horeysay dadka laga soo barakaciyay dhawaan magaaladda Laascaanood, xarunta G/Sool.
Wasiiro katirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay Gaalkacyo diyaarad uga soo qaadeen illaa 21 qoys, oo caruur wata, waxaana billaabatay daad-gureynta dadkii Somaliland sida xun ula soo dhaqantay.
Madaxweyne Lafta-Gareen ayaa gudi wasiiro ah u xilsaarey dib usoo celinta kumanaan qof oo degaanada Puntland la keenay, iyadoo loo kireeyay diyaarado kasoo qaada Gaalkacyo.
Faquuq iyo isir sooc ayay Somaliland ku sameysay dadka kasoo jeeda Koonfur Galbeed, kuwaasoo mudo 20 sano ka badan ku noolaa Laascaanood, oo ku dhaleen caruur maanta qaangaar ah.
Somaliland waxay tuhmaysaa in dadka ay qeyb ka yihiin amni darada magaaladda ka jirta, oo la rumeysan yahay inuu ka yimid fashil dhanka maamulka Hargeysa, oo aan degaanka laga taageersanayn wax badan.
0 Comments Topics: laascaanood somaliland soomaaliya